Sintomy sy miloko maimaimpoana ho an'ny ankizy
Pejy fandokoana ankizy
Pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy - miaraka amin'ny ankizy ho antony sy ho an'ny ankizy amin'ny fampisehoana ho an'ny ankizy. Miaraka amin'ny motif miaraka amin'ny traikefa nahafinaritra niaraka tamin'ny namana ka hatramin'ny pejy fandokoana hatramin'ny kianja filalaovana ka hatramin'ny lohahevitra ifamaliana sy iarahana indray.
Ny pejinay fandokoana ny ankizy dia mampiseho ny toe-javatra izay avo dia avo ny fanekena ny ankizy. Ka ho faly indrindra ny afaka mandoko ireo pejy fandokoana ireo amin'ny ankizy. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny maodely fandokoana.
Zanaky ny tany
Ankizy manao fitsidihana bisikileta
Ankizy manodidina ny afon-dasy
Mifamaly ary mandefera
Ankizy amin'ny unicorn
Ankizy any Eropa
Ankizy any Afrika
Kind any Azia
Ankizy pejy fandokoana
Ankizilahy sy zazavavy
Kianja filalaovana seesaw
Milalao amin'ny fotaka
Milalao miafina sy mitady
Ny zaza manangana lapa fasika
Kianja filalaovana slide
Atsaharo ny fanavakavahana
Tady miolakolaka / mitsambikina
Fanamboarana asa tanana sy hosodoko
Milalao amin'ny fasika
Mihaino mozika ny zazalahy
Tovovavy miaraka amin'ny bunny
Mifanohitra ny ankizy
Ankizy / kambana
Teny lakile fanampiny: zaza, ankizy, ankizy, ankizy
Pejy fandokoana ho an'ny ankizy kely